Ciidamada Kenya oo isaga baxay Degmada Ceelcadde & Shabaab oo qabsaday – STAR FM SOMALIA
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo Ciidamada Kenya ayaa isaga baxay Ceelcadde, xalay saqdii dhexe iyadoo Shabaab ay la wareegeen gacan ku haynta Degmada Ceelcadde.
Dadka Deegaanka ayaa sheegay ciidamada Kenya inay guud ahaan ka guureen Magaalada Ceelcadde xalay saqdii dhexena ay ka baxeen Magaalada iyaga oo u dhaqaaqay dhanka xuduuda Somaliya iyo Kenya ay wadaagaan.
Xilliga ciidamada Kenya ay ka baxayeen Magaalada Ceelcadde ayaa waxaa hawada laga saaray Isgaarsiinta Ceelcadde, balse saaka aroortii ayaa isgaarsiinta hawada dib loogu soo celiyay.
Ciidamada Shabaab ayaa saaka aroortii qabsaday Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo, markii ay xaqiijiyeen in ciidamada Kenya ay isaga baxeen Degmadaasi.
15-kii Bishan ayeey aheyd markii ciidamada Shabaab weerar culus ay ku qaadeen Saldhigii ciidanka Kenya ay ku lahaayeen Degmada Ceelcadde, halkaasi oo ay ku dileen ciidamo aad u fara badan oo kuwa Kenya ka tirsan.
Weerarkii Ceelcadde 11 maalin kadib ciidamada Kenya ayaa isaga baxay Degmada Ceelcadde, xilli duqeyn culus Diyaaradaha Kenya ay ku asqeeyeen deegaano ka tirsan Gobolka Gedo ee Koonfurta Somaliya.
Madaxweynaha Kenya ayaa ku eedeeyay weerarka Ceelcadde inay fududeeyeen beel ka mid ah Beelaha Degta Gobolka Gedo.